Jly Rasolofonirina Béni Xavier : “Tsy hiaro ireo miaramila nanao fanafihana izahay…” | NewsMada
Jly Rasolofonirina Béni Xavier : “Tsy hiaro ireo miaramila nanao fanafihana izahay…”
Nahitsy ny minisitry ny Fiarovana, ny Jly Rasolofonirina Béni Xavier raha nanambara fa tsy miaro ary tsy hanao fanelanelanana mihitsy manoloana ireo miaramila kaporaly roa lahy sy polisy iray, anisan’ireo nanafika ireo sinoa mpitrandraka volamena, tany Mananjary, ny herinandro teo…
Niaiky ny minisitry ny Fiarovana, ny Jly Rasolofonirina Béni Xavier fa tena nisy tokoa ireo miaramila nandray anjara mivantana tamin’ilay fanafihan-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tao amin’ireo Sinoa mpitrandraka volamena, ao Mananjary, ny alakamisy alina teo. « Marina tokoa fa nisy miaramila teo anivon’ny tafika sy polisy avy ao amin’ny polisim-pirenena nandray anjara tamin’iny fanafihana iny. Efa eo am-pelatanan’ny mpanao famotorana izy roa lahy ireo ary ny famotorana dia mitohy », hoy izy raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ny fisian’ireo miaramila nandray anjara mivantana tamin’ilay fanafihana. Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony ity aza fa « tsy mpiaro ny olona sahala amin’izany izahay ary tsy miray tsikombakomba amin’izany fa rehefa manao ny asa ratsiny izy dia tompon’andraikitra tanteraka amin’ny maha olom-pirenena azy. Tsy hiditra hanao fanelanelanana amin’izany na ny minisitry ny Filaminana anatiny na ny minisiteran’ny Fiarovana”, hoy hatrany izy.
Voasaringotra ao anatina fanafihan-jiolahy hatrany ny mpitandro filaminana. Misy ireo mandray anjara mivantana toy ity tany Mananjary ity, misy kosa ireo miray tsikombakomba na mampanofa fitaovam-piadiana, toy ny basy Kalachnikov na PA.
Mpiambina tompon’andraiki-panjakana ambony…
Voalazan’ny loharanom-baovao marim-pototra fa mpiambina tompon’andraiki-panjakana ambony eto amin’ny firenena sy olom-boafidy iray ao Manakara ireto miaramila roa lahy nivadika nanao asan-jiolahy ireto. Miasa ao amin’ny kaomisarian’i Mananjary kosa ilay polisy niaraka tamin’izy roa lahy ireo. Isan’ireo tratra niaraka tamin’izy ireo ny vadina fonksionera ambony miasa ao amin’ny distrikan’i Mananjary.
Tsiahivina fa isan’ireo enina voasambotra tamin’ireo jiolahy miisa 12 tompon’antoka tamin’ny fanafihana ny toeram-pitrandrahana volamena an’ny Sinoa ao amin’ny reniranon’i Mananjary, fokontany Morarano, kaominina Ambalahody Atsimo, distrikan’i Mananjary, ny alakamisy 23 novambra 2017 lasa teo ireto miaramila roa lahy sy brigadier de police iray miasa ao amin’ny kaomisarian’i Mananjary. Tratran’ny zandary tany amin’izy ireo ny basy PA roa miaraka amin’ny bala.
Tsikaritr’ireo mponina teo an-tanàna ny fahatongavan’ireo jiolahy, saingy niteny tamin’ny mponina izy ireo hoe “aza mikoropaka ianareo fa ireto sinoa mitrandraka ny harenantsika ireto no ho tafihinay. Tsy hikasika ny Malagasy izahay fa haka ny anjaran’ny Malagasy any amin’ireo Sinoa”, hoy ireo jiolahy, araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana.
Mitohy kosa ny fanarahan-dia ataon’ny zandary ireo jiolahy naman’ireto efa voasambotra ireto. Voalazan’ny loharanom-baovao hatrany kosa fa mbola any am-pelatanan’ilay polisy voasambotra ny vola gasy niaraka tamin’ny volamena nalain’izy ireo tao amin’ireo Sinoa mpitrandraka volamena.
Une réponse à "Jly Rasolofonirina Béni Xavier : “Tsy hiaro ireo miaramila nanao fanafihana izahay…”"
Dadamo 29/11/2017 à 11:29
Sao dia mba miverimberina tokoa ary ny tantara: ny akamaroan’ireo “menalamba” fahiny anie ka nalaza fa “dahalo” ê; rehefa tsy nihetsika ny sangany teto Tana, dia nitasangana ry zareo.